Na-eme ka ikuku gas dị na okwute, usoro dị irè iji gboo okpomoku zuru ụwa ọnụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmadu obula choro ka ha nwee ihe obula di nkpa ka ha nwee ike ibi ndu nke oma, ugbua na rue ebighebi, bu ihe ezi uche di na ya. Mana ọ bụrụ na anyị eburu n’uche na ndị anyị bi na mba ndị a na-akpọ “mba ụwa mbụ” bụ ndị mmadụ ga-enwe ezigbo mmetụta na ime ihe ndị na-emetọ ya, dịka ịkwọ ụgbọ ala nke na-agba mmanụ ụgbọala ma ọ bụ mmanụ dizel, ma ọ bụ ịtụfu ihe n’oké osimiri kama. Site n’ịgbugharị ha, anyị enweghị ihe ọzọ anyị ga-eme ma ọ́ bụghị ịchọta ụzọ ndị dị irè isi gbochie, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, belata okpomọkụ nke ụwa.
Otu n'ime nchọpụta ọhụụ kacha ọhụrụ bụ nke ụlọ ọrụ Switzerland bụ Climeworks kwuru, bụ ndị ya na Reykjavik Energy, na-aga ịmalite ikuku carbon dioxide site na ikuku na Iceland na ebumnuche nke ịgbanwe ya ka ọ bụrụ okwute dị n'okpuru ala.
Ihe oru ngo a, nke European Union kwadoro, bu nke mejuputara lie carbon carbon dioxide site na ikuku n’otu afọ site na iji fans na kemịkalụ oghere. 50 tọn CO2 bụ ihe dị ka otu ezinụlọ ndị America na-etinye na mbara igwe n'ime ọnwa iri na abụọ, na-eburu n'uche na anyị na-aga ụzọ ijeri mmadụ iri, na-enweghị mgbagha na nnwale a nwere ike ịbụ ụzọ na-adọrọ mmasị iji gbochie mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Ọzọkwa, ọ bụ usoro enweghị nsogbu gburugburu ebe obibi.
Gas na-agbaze na mmiri ma zipụ ya ihe dị ka mita 1000 n'okpuru ala, ebe ụlọ ọrụ Ike Reykjavik Ọ na-ekwu na carbon na-emeghachi na nkume basalt wee ghọọ okwute ihe dịka afọ abụọ. Naanị nsogbu bụ ụgwọ: iwepụta otu tọn gas ga-efu ọtụtụ narị dollar. Agbanyeghị, onye isi na onye guzobere ya Ọrụ Clime O kwuru na oge ha na-eme ya na obere ọkwa, mana na ebumnuche bụ ka enwee ike ime ya n'ọtụtụ buru ibu. Mgbe nke ahụ nwere ike ime, ọnụ ahịa ya ga-agbadata n'ezie.
Kedu ihe ị chere gbasara usoro a? Ì chere na ọ ga-arụ ọrụ n'ezie?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Gbanwe gas na-eme ka ikuku ghọọ nkume, usoro dị irè iji gboo okpomoku zuru ụwa ọnụ
Nzọụkwụ megide nsogbu nke Spain na mgbanwe ihu igwe